ပဋ္ဌာန်း ဒေသနာကို မှန်မှန် ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးများ – WunYan
ပဋ္ဌာန်း ဒေသနာကို မှန်မှန် ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးများ
ပဋ္ဌာန်း မှန်မှန် ၊ နှစ်ရှည် ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးများကို ယုတ္တိ သဘောဖြင့် ဆင်ခြင်ကြည့်ခြင်း …
ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ် ဆိုတာ ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယ ဥဒေသ နဲ့ ပစ္စယ နိဒေသ တို့ ကို ရွတ် ဆိုတာ ကိုဆိုလိုပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားခဲ့တဲ့ ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကို အရှင်သာရိပုတ္တရာ က မကျဉ်းမကျယ် ပြန် ဟောထားတဲ့ ပဋ္ဌာန်း ၅ ကျမ်းကိုတော့ မြည်သံမစဲ ပဋ္ဌာန်းပွဲ ဆိုပြီး ရွတ် ဆိုကြတာလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကတော့ ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယ ဥဒေသ နဲ့ ပစ္စယ နိဒေသ ကို ပဲ ရွတ်ကြပါတယ်။ အသံမှန် နဲ့ ရွတ်ရင် နာရီ ဝက်လောက် အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ အသံထွက်ပြီး ရွတ်ရပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ် နားမလည်ခင်ပဋ္ဌာန်းရွတ် တဲ့အခါ …. စိတ်ထဲ မှာ ရှိနေသင့်တာက … အော် …….. မြတ်စွာဘုရား ဟောခဲ့ တဲ့ တရားကို ငါလိုက်ဆိုနေတာပါလား။ တရားဓမ္မကို ရွတ်ဖတ်ခြင်း ဖြင့် ဘုရား ကို ဓမ္မဖြင့် ငါ ပူဇော် နေတာပါလား ဆိုတဲ့ အသိ တရား (သတိတရား) နဲ့ ရွတ်ကြပါတယ်။ ရွတ်ဆိုနေရာမှာ လည်း အသံထွက် မမှားရအောင် ၊ တရားအစီအစဉ် မလွဲရအောင် ၊ တလေးတစား နဲ့ ရွတ်ရပါတယ်။
နေ့စဉ်မှန်မှန်ရွတ်တော့ ဘာအကျိုးရှိသလဲ ဆိုတာ ယုတ္တိ သဘောနဲ့ ဆင်ခြင် ကြည့်တော့ …
(၁) နေ့စဉ် ကောင်းမှု ကုသိုလ် တစ်ခု ကို အာစိန္နကံ အားထုတ် ရာရောက်ပါတယ်။ နေ့စဉ် တစ်လ နှစ်လ လောက်ရွတ် ယုံနဲ့ မထူးခြားပေမယ့်.. နေ့စဉ် မှန်မှန် ၁၀ နှစ် အနှစ် ၂၀ ရွတ် လာတဲ့ လူအတွက် ကျတော့ …. ကုသိုလ်တွေစုမိသလို ဖြစ်လာပါတယ်။
(၂) နေ့စဉ် မှန်မှန် နှစ်ချီ ရွတ်လာတော့ အလေ့အကျင့် ဖြစ်လာပါတယ်။ ကျင့်သားရနေတော့ အရေးအကြောင်းဆို ပါးစပ်က ပဋ္ဌာန်းဒေသနာ ကို အလိုလို ရွတ် မိလျှက်သား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ လောကဒဏ် နဲ့ မမျှော်လင့်ပဲရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခါမှာ … ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ဒေါသ ဖြစ်ခြင်း စတာတွေ ထက် …. ပဋ္ဌာန်းတရား ပေါ် အာရုံရောက်သွားပြီး၊ အကုသိုလ် ဖြစ်ရမယ့်နေရာမှာတောင် ကုသိုလ် ဖြစ်ဖြစ် နေတတ်ပါတယ်။
(၃) တစ်နေ့ တစ်ခါ ရွတ် ဆိုနေကျကို … တစ်နေ့ရွတ်ဆိုပြီးသွားတိုင်း ….. အော်… ဒီနေ့တော့ ငါ ပြုနေကျ ကုသိုလ် ကောင်းမှု တစ်ခု … တစ်နေ့စာ အောင်မြင် ပြီးမြောက်ခဲ့ပြန်ပြီ ဆိုတဲ့ … ကျေနပ်တဲ့စိတ် ၊ ဝမ်းမြောက် တဲ့ စိတ်ဟာလည်း … ကျန်တစ်နေ့တာ လုံးကို စိတ်ထဲ လမ်းဆမ်းစေဖို့ အထောက်အကူ ပြုနိုင်ပါတယ်။
(၄) တစ်နေ့ နာရီဝက်လောက် မပျက်တမ်း နှစ်ရှည် ရွတ်လာ တာ…. ကြာတော့လည်း ….. ရေစက်ကလေးတွေ စုလာတော့ .. ရေအိုးပြည့်သလိုပါပဲ ။ ကိုယ့် သဏ္ဍန်မှာ ဓမ္မနဲ့ ပူဇော် ရတဲ့ ကုသိုလ်တွေ ပြည့်နေတော့ …. ဘဝ အဆက်ဆကိက ပြုခဲ့တဲ့ အကုသိုလ်တွေ၊ ယခုအခါ အမှတ်တမဲ့ ပြုလိုက်မိတဲ့ အကုသိုလ်တွေ ဟာ အကျိုးပေးခွင့်အလားအလာ နည်းပါးလာပြီး။ ဘဝ အဆက်ဆက်က ပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်တွေ။ ယခု ပြုလိုက်တဲ့ တခြားကုသိုလ်တွေ ဟာ တော့ အကျိုးပေးဖို့ အခွင့်သာ လာပါလိမ့်မယ်။
(၅) သေခါ နီးပြီဆိုပါစို့ ၊ မိသားစု ထဲက တစ်ယောက်ယောက်လောက်က ပဋ္ဌာန်း ရွတ်သံကလေး ပေးလိုက်တယ် ဆိုပါစို့ ။ ကိုယ်ကနှစ်ရှည် အလေ့အကျင့်ကောင်းကောင်း ရှိထားတယ် ဆိုရင် စုတိစိတ်ဖြစ်ခါနီး ကလေး မှာ ၊စိတ်က ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကို စွဲ ပြီး သေရတော့ … အပါယ် ကျဖို့ မဖြစ်နိုင်။ သုဂတိ ဘဝ ကိုရဖို့ က သေခြာသွားပြန်ရော။
(၆) ဒီဘဝ ပဋ္ဌာန်း နှစ်ရှည် မှန်မှန် ရွတ် ထားတဲ့ ပါရမီ ကောင်း က ရှိနေတော့ ၊နောက်ဘဝ ကျပြန်တော့ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်ပြီး ရွတ်ရင်း ဆင်ခြင် သုံးသတ်ပြီး အကျွတ်တရားတောင်ရနိုင်ပါတယ်။
Credit : Myo Nyunt
ပဋ်ဌာနျး ဒသေနာကို မှနျမှနျ ရှတျခွငျး၏ အကြိုးမြား
ပဋ်ဌာနျး မှနျမှနျ ၊ နှဈရှညျ ရှတျခွငျး၏ အကြိုးမြားကို ယုတ်တိ သဘောဖွငျ့ ဆငျခွငျကွညျ့ခွငျး …
ပဋ်ဌာနျးရှတျတယျ ဆိုတာ ပဋ်ဌာနျး ပစ်စယ ဥဒသေ နဲ့ ပစ်စယ နိဒသေ တို့ ကို ရှတျ ဆိုတာ ကိုဆိုလိုပါတယျ။ မွတျစှာဘုရား ဟောကွားခဲ့တဲ့ ပဋ်ဌာနျးဒသေနာကို အရှငျသာရိပုတ်တရာ က မကဉျြးမကယျြ ပွနျ ဟောထားတဲ့ ပဋ်ဌာနျး ၅ ကမျြးကိုတော့ မွညျသံမစဲ ပဋ်ဌာနျးပှဲ ဆိုပွီး ရှတျ ဆိုကွတာလညျးရှိပါတယျ။ ကိုယျ့ တဈနိုငျတဈပိုငျကတော့ ပဋ်ဌာနျး ပစ်စယ ဥဒသေ နဲ့ ပစ်စယ နိဒသေ ကို ပဲ ရှတျကွပါတယျ။ အသံမှနျ နဲ့ ရှတျရငျ နာရီ ဝကျလောကျ အလုပျလုပျရပါတယျ။ အသံထှကျပွီး ရှတျရပါတယျ။
အဓိပ်ပါယျ နားမလညျခငျပဋ်ဌာနျးရှတျ တဲ့အခါ …. စိတျထဲ မှာ ရှိနသေငျ့တာက … အျော …….. မွတျစှာဘုရား ဟောခဲ့ တဲ့ တရားကို ငါလိုကျဆိုနတောပါလား။ တရားဓမ်မကို ရှတျဖတျခွငျး ဖွငျ့ ဘုရား ကို ဓမ်မဖွငျ့ ငါ ပူဇျော နတောပါလား ဆိုတဲ့ အသိ တရား (သတိတရား) နဲ့ ရှတျကွပါတယျ။ ရှတျဆိုနရောမှာ လညျး အသံထှကျ မမှားရအောငျ ၊ တရားအစီအစဉျ မလှဲရအောငျ ၊ တလေးတစား နဲ့ ရှတျရပါတယျ။
နစေ့ဉျမှနျမှနျရှတျတော့ ဘာအကြိုးရှိသလဲ ဆိုတာ ယုတ်တိ သဘောနဲ့ ဆငျခွငျ ကွညျ့တော့ …
(၁) နစေ့ဉျ ကောငျးမှု ကုသိုလျ တဈခု ကို အာစိန်နကံ အားထုတျ ရာရောကျပါတယျ။ နစေ့ဉျ တဈလ နှဈလ လောကျရှတျ ယုံနဲ့ မထူးခွားပမေယျ့.. နစေ့ဉျ မှနျမှနျ ၁၀ နှဈ အနှဈ ၂၀ ရှတျ လာတဲ့ လူအတှကျ ကတြော့ …. ကုသိုလျတှစေုမိသလို ဖွဈလာပါတယျ။
(၂) နစေ့ဉျ မှနျမှနျ နှဈခြီ ရှတျလာတော့ အလအေ့ကငျြ့ ဖွဈလာပါတယျ။ ကငျြ့သားရနတေော့ အရေးအကွောငျးဆို ပါးစပျက ပဋ်ဌာနျးဒသေနာ ကို အလိုလို ရှတျ မိလြှကျသား ဖွဈနတေတျပါတယျ။ လောကဒဏျ နဲ့ မမြှျောလငျ့ပဲရငျဆိုငျရတဲ့ အခါမှာ … ကွောကျရှံ့ခွငျး၊ ဒေါသ ဖွဈခွငျး စတာတှေ ထကျ …. ပဋ်ဌာနျးတရား ပျေါ အာရုံရောကျသှားပွီး၊ အကုသိုလျ ဖွဈရမယျ့နရောမှာတောငျ ကုသိုလျ ဖွဈဖွဈ နတေတျပါတယျ။
(၃) တဈနေ့ တဈခါ ရှတျ ဆိုနကေကြို … တဈနရှေ့တျဆိုပွီးသှားတိုငျး ….. အျော… ဒီနတေ့ော့ ငါ ပွုနကြေ ကုသိုလျ ကောငျးမှု တဈခု … တဈနစေ့ာ အောငျမွငျ ပွီးမွောကျခဲ့ပွနျပွီ ဆိုတဲ့ … ကနြေပျတဲ့စိတျ ၊ ဝမျးမွောကျ တဲ့ စိတျဟာလညျး … ကနျြတဈနတေ့ာ လုံးကို စိတျထဲ လမျးဆမျးစဖေို့ အထောကျအကူ ပွုနိုငျပါတယျ။
(၄) တဈနေ့ နာရီဝကျလောကျ မပကျြတမျး နှဈရှညျ ရှတျလာ တာ…. ကွာတော့လညျး ….. ရစေကျကလေးတှေ စုလာတော့ .. ရအေိုးပွညျ့သလိုပါပဲ ။ ကိုယျ့ သဏ်ဍနျမှာ ဓမ်မနဲ့ ပူဇျော ရတဲ့ ကုသိုလျတှေ ပွညျ့နတေော့ …. ဘဝ အဆကျဆကိက ပွုခဲ့တဲ့ အကုသိုလျတှေ၊ ယခုအခါ အမှတျတမဲ့ ပွုလိုကျမိတဲ့ အကုသိုလျတှေ ဟာ အကြိုးပေးခှငျ့အလားအလာ နညျးပါးလာပွီး။ ဘဝ အဆကျဆကျက ပွုခဲ့တဲ့ ကုသိုလျတှေ။ ယခု ပွုလိုကျတဲ့ တခွားကုသိုလျတှေ ဟာ တော့ အကြိုးပေးဖို့ အခှငျ့သာ လာပါလိမျ့မယျ။
(၅) သခေါ နီးပွီဆိုပါစို့ ၊ မိသားစု ထဲက တဈယောကျယောကျလောကျက ပဋ်ဌာနျး ရှတျသံကလေး ပေးလိုကျတယျ ဆိုပါစို့ ။ ကိုယျကနှဈရှညျ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးကောငျး ရှိထားတယျ ဆိုရငျ စုတိစိတျဖွဈခါနီး ကလေး မှာ ၊စိတျက ပဋ်ဌာနျးဒသေနာကို စှဲ ပွီး သရေတော့ … အပါယျ ကဖြို့ မဖွဈနိုငျ။ သုဂတိ ဘဝ ကိုရဖို့ က သခွောသှားပွနျရော။
(၆) ဒီဘဝ ပဋ်ဌာနျး နှဈရှညျ မှနျမှနျ ရှတျ ထားတဲ့ ပါရမီ ကောငျး က ရှိနတေော့ ၊နောကျဘဝ ကပြွနျတော့ ဉာဏျကောငျးတဲ့ သူ ဖွဈပါတယျ။ ဆကျပွီး ရှတျရငျး ဆငျခွငျ သုံးသတျပွီး အကြှတျတရားတောငျရနိုငျပါတယျ။